PUBG MOBILE LITE APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » PUBG MOBILE Lite
PUBG MOBILE Lite APK ကို
PUBG MOBILE Lite ကဒီမှာပါ! Unreal Engine ကို4နှင့်အတူတည်ဆောက် PUBG MOBILE ၏ဤဗားရှင်းအရွယ်အစားသေးငယ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပရိတ်သတ်တွေသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်သောအံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံမထိခိုက်စေဘဲသေးလျော့နည်း RAM ကိုအတူပိုပြီး devices များနှင့်အတူတွဲဖက်သုံးပါ! PUBG MOBILE Lite ရိုးရာ PUBG MOBILE setting ကိုတစ်ဦးထက်ပိုသောရတာဟာတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံကပေး, အစာရှောင်ခြင်း-PACE ပွဲနှင့် 60 ကစားသမားများအတွက်လုပ်သေးငယ်တဲ့မြေပုံပါရှိပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာတာဝန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, ရှင်သန်မှုများအတွက်စစ်မြေပြင်တွင်လွတ်လပ်စွာကွာပစ်ခတ်!
1 ။ PUBG MOBILE Lite
ဂရပ်ဖစ်ကြွယ်ဝသော 60km ပေါ်သို့2ကစားသမားလေထီးထိပ်တိုက်တွေ့နေတဲ့-ကြာ-အားလုံးဆုရှင်များအတွက် 2km ကျွန်း x ။ ကစားသမားကနောက်ဆုံးကစားသမားရပ်တည်မှုဖြစ်ဖို့အစဉ်အဆက်-ကျုံ့ကစားဇုန်ထဲမှာထွက်အပြင်းအထန်နေချိန်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နက်များ, မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများအဘို့ကိုယူပြီးတော့ရန်ရှိသည်။ ဆင်းသက်ရန်အဆင်သင့် Get နှင့်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အချိန်ယူဘာပဲလုပ်ပါ။
2 ။ high-quality ရစ်ဖစ်များနှင့် HD ကိုအသံ
အဆိုပါအစွမ်းထက် Unreal Engine ကို4ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အသေးစိတ်, လက်တွေ့ဂိမ်းဆိုးကျိုးများနှင့်နည်းဗျူဟာအရေးယူအမျိုးအစားအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအကြီးအကျယ် HD ကိုမြေပုံနှင့်အတူတစ်ဦးမေးရိုး-ကျဆင်းနေအမြင်အာရုံအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ သငျသညျက high-quality audio ကများနှင့်ချမ်းသာသော 3D သံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူဆော့ကစားအတိုင်းစစ်မြေပြင်ပေါ်ကွာမီးကိုအခမဲ့ခံစားရသည်။
3 ။ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရေးအဖွဲ့ Up ကို
Invite နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုအတူတက်ရှိနေသေးသည်စကားသံကိုချက်တင်အားဖြင့်သင်တို့၏စစ်တိုက်မည့်အစီအစဉ်ကိုသြဒိနိတ်နှင့်သင်၏ရန်သူတို့ကိုစုံလင်ကင်းတပ်ကို set up ။ သင်၏မိတ်ဆွေများကိုကူညီခြင်းသို့မဟုတ်ရသောအခါ Clan ရဲ့တာဝန်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသင့်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပြုထားဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါခေါ်ဆိုခအဖြေ!
4 ။ တရားမျှတသောဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်
အစွမ်းထက် Anti-cheat ယန္တရားများအားလုံး PUBG MOBILE Lite ကစားသမားများအတွက်ပျော်စရာတရားမျှတတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အာမခံပါသည်။
တရားဝင် site ကို: http://www.pubgmlite.com
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/PUBGMOBILELITE/
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါက PUBGMOBILElite_CS@tencentgames.com မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်သွယ်ပါ
နယူး WP Theme ကိုနှင့်ဆုလာဘ်
နောက်ဆုံးရေးသားချိန် system setting များကို
တိုးတက် UI ကို & update ကိုဗူးအရွယ်အစား
စစ်တိုက်တဲ့ parameters တွေကိုတိုးတက်
561.01 ကို MB
ကို Tencent အားကစားပြိုင်ပွဲ
PUBG များအတွက် Booster ...